Lacagta Koonfur Afrika oo Qiima Dhacday – Radio Daljir
Diseembar 27, 2015 7:25 b 0
Axad, December 27, 2015 (Daljir) —Hoos u dhicii ugu weynaa abid ayaa ku yimid lacagta laga isticmaalo Koonfur Afirka ee Rand-ka loo yaqaanno, kaddib markii si aan la filayn uu Shiinuhu u dhimay qiimaha lacagtiisa, taasoo horseedday inay saameeyso lacagta Koonfur Afrika; maadaama Shiinuhu uu yahay waddanka ugu weyn ee uu ganacsiga kala dhaxeeyo dalka Koonfur Afrika.
Madaxweynaha Koonfur Afrika, Jocab Zuma ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay afar maalin gudahood isku-bedely saddex wasiir wasaaradda dhaqaalaha dalkaas ah si loo helo cid wax ka qaban karta qiima dhaca ku yimid lacagta Rand-ka ee waddankaas laga isitmcaalo.
Halkii Doollar ayaa hadda maraya 15.22-Rand wuxuuna gaaray todobaadkii hore 16-Rand, taasoo walaal xoogan ku abuurtay ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah ee maal-gashtay dalkaas, waxaana jira walaac xoogan oo laga qabo dhaqaalaha sabbeynaya ee Shiinaha.
Sidoo kale, hoos u dhaca ku yimid lacagta dalka koonfur afrika ayaa wuxuu ku yeeshay saameyn weyn ganacsatada Soomaaliyeed, Kuwaasoo alaabtooda kusoo gata Doollarka Mareykanka, iyagoo ay cabasho ka muujiyeen hoos u dhaca Rand-ka, taasoo khaasaare aad u weyn ku keeni karta, haddii aan si dhaqsa ah wax lagaga qaban.
Qiima dhacan ku yimid lacagta Koonfur Afrika ayaa loo sababeynayaa loolanka dhaqaale ee u dhexeeya wadamada Shiinaha iyo Mareykanka, maadaama Shiinuhu uu galay kaalintii Mareykanku kaga jiray dhaqaalaha caaalmka, waxaa kaloo uu Shiinuhu ku guuleystay inuu Xiriirka ballaaran oo ganacsi la yeesho waddamada Qaaradda Afrika taasoo sii Xoojinaysa loolanka labada waddan u dhexeeya.
Dhanka kale, Waxaa kaloo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Dalka Koonfur Afirka cuno-qabteynta la saaray wadanka Ruushka, maadaama ay ka-wada tirsan yihiin ururka Hanti-wadaagga ah ee BRICS.
Ugu dambeyn, Koonfur Afrika ayaa ku jiray dalalka fara-ku-tiriska ah ee Qaaradda Afrika oo dunida u suuq-geeya khayraadka dabiiciga ah, balse sannadkii 2012-kii, ayaa shirkadihii wax-soo-saarka intooda badan ay ka baxeen Koonfur Afrika iyagoo xaraashay qalabkoodii, kafdib markii uu khilaaf soo dhexgalay shirkadahaas iyo shaqalaha macdanta qoda, taasoo sababtay in maalin keliya la dilo in kabadan 34 ka mid ah shaqaalihii Macdan-qodayaasha ah xili ay dhigayeen dibadbax ay ku dalbanayaan in loo kordhiyo mushaaraadka.